आज बाट ग्याँस बिक्री वितरण बन्द, पेट्रोल पनि बन्द गर्ने चेतावनी ! – Sandes Post
March 31, 2022 1253
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले कमिसन कटौती गरेको विरोधमा ग्याँस उद्योगहरुले आजबाट बिक्रेताहरुलाई ग्याँस बिक्री वितरण बन्द गरेका छन् ।
कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिको आह्वानमा पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आजबाट एलपी ग्याँस उद्योगीहरुले बिक्रेतालाई बिक्री वितरण बन्द गरेका हुन् ।
कमिसन कटौतीको निर्णय नसच्याए चैत २० गतेदेखि देशभर ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।
निगमले पेट्रोलियम बिक्रेतालाई प्रतिशतको आधारमा दिंदै आएको कमिसन २०७८ फागुन १९ गतेबाट बन्द गरेको थियो । उक्त कमिसन पाउनुपर्ने र २०७७ मंसिर १८ गतेबाट स्थगन गरिएको प्राविधिक नोक्सानीका सम्बन्धमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार लागु गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर उनीहरुले चैत ५ गतेदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
पूर्वघोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार चैत ६ गतेबाट सबै एलपी ग्यास उद्योगहरुले नेपाल आयल निगमबाट पीडीओ खरिद रोकेका थिए । यस्तै एलपी ग्याँस उद्योगहरुले चैत १४ गतेदेखि सबै नाकाहरुबाट भन्सार छुटाउने काम रोकेका थिए ।
यससँगै अब पेट्रोल किन्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ। प्रवक्ता विनितकुमार उपाध्यायले निगम चरम आर्थिक संकटमा गुज्रन थालेपछि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए। निगमले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम खरिदमा सहजीकरण तथा खपत गर्न १० बुँदे प्रस्ताव गरेको हो। ‘पेट्रोलियमको मूल्य बढेर आउँदा हाम्रो घाटा पनि बढेर गयो’ उनले भने, ‘ठेग्न नसक्ने स्थिति भएपछि राज्यलाई विकल्प दिएका छौं।’
निगमले अब पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा एलपी ग्यासमा प्रतियुनिट जे–जति घाटा भए पनि एकैपटक समायोजन हुनेगरी न–नाफा, न–घाटा अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य १ सय २० डलर पुगेको छ। यसअघि १ सय ३५ डलरसम्म पुगेको थियो। रुस–युक्रेनको लडाइँ र डलरको भाउ बढेकाले पेट्रोलियमको भाउ बढेको हो। पेट्रोलियमको भाउमा उछाल आएपछि समस्या सिर्जना भएको उपाध्यायले बताए।
निगमले बर्सेनि दुई खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम खरिद गरिरहेको छ। यो कुल आयातको २० प्रतिशत हो। माघसम्म निगमको घाटा २४ अर्ब रुपैयाँ थियो। उक्त घाटा एक महिनाको अवधिमा बढेर २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चैत्रको दुई सातामै घाटा उच्च बढेको निगमले जनाएको छ।
निगमले सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषजस्ता संस्थाबाट आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिएको छ।
सरकारले विकल्प नसोचे घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न नसक्ने चेतावनी निगमको छ। यसअघि नै निगमले पेट्रोलियम खरिदबापत आवश्यक रकम जुटाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो।
पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सरकारले निगमलाई ऋण दिनुपर्ने, भारतीय आयल निगमलाई उधारोमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मूल्य समायोजन, बिजुलीको खपत विकल्प रहेको बताउँछन्। निगमले एकैचोटी मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्तालाई ठेग्न गाह्रो हुने उनले बताए। सरकारले पेट्रोलबाट ५८.४९ पैसा कर असुल्छ। तर, संकटका बेला पनि निगमलाई सहयोग गरेको छैन। डिजेलमा ४१.१५, मट्टीतेलमा १३.२२, एलपी ग्यासमा २७३.९४ र हवाई इन्धनमा १६.४९ रुपैयाँ कर उठाउँछ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव हरिप्रसाद मैनाली पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसले धेरैमा असर पुर्‍याउने भएकाले कर अधिक मात्रामा लिनु जायज नरहेको बताउँछन्। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधारलगायत शुल्कमा प्रतिलिटर १५ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय रुपैयाँसम्मले सरकारी शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ।
विद्युुतीय सवारीसाधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्नेपर्ने निगमको सुझाव छ। पेट्रोल हाम्रो उत्पादन नभएकाले जति मूल्य महँगिए पनि किन्नु बाध्यता भएको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बताए । ‘विद्युत् उत्पादन नबढाई सुखै छैन’ उनले भने, ‘सरकारले पीपीए गर्न छोड्नु नै विडम्बना हो।’ कुनै समय पेट्रोल विलासी वस्तुका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर अहिले दूध बेच्ने किसानलाई पनि पेट्रोल नभई नहुने भएको छ। छोटो दूरीमा सवारीसाधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्नसमेत निगमको अनुरोध छ। त्यस्तै हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन पनि सुझाइएको छ। यसले सरकारी साधनको प्रयोग कम हुने आँकलन छ।
संवेदनशील क्षेत्र वा निकायबाहेकका निजी तथा सरकारी सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको बताए। रेग्मीले भने, ‘मूल्य नियन्त्रण गर्न अनेक उपाय हुन सक्छन्। त्यसबारे सरकारले सोच्न सक्छ।’
Prevओहो ! ब ला त्कारी जस्तोसुकै ठूलो मान्छे भएपनि फाँ सी नै दिनु पर्छ,झु न्डाएर समाजमा ते र्साउन पर्छ भन्दै आइन् जय नारी अभियानता सावित्री (भिडियो हेर्नुस्)
Nextसुनको मूल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?